လီဗာပူး ၊ အင်တာ ၊ ရာဖင်ဟာ တို့ နဲ့ . . . စနေနေ့ ညပွဲအပြီး မှာ မှတ်တမ်းသစ် စိုက်ထူခဲ့ကြသူများ - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး ၊ အင်တာ ၊ ရာဖင်ဟာ တို့ နဲ့ . . . စနေနေ့ ညပွဲအပြီး မှာ မှတ်တမ်းသစ် စိုက်ထူခဲ့ကြသူများ
လီဗာပူး အသင်း ဟာ ယမန်နေ့ ညက ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၃ အဖြစ် ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်း ရဲ့ အိမ်ကွင်း ကို သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့ပြီး ၂ – ၁ ရလဒ် နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီနိုင်ပွဲ ဟာ လီဗာပူး ကို အမှတ်ပေး ဇယား ရဲ့ အဆင့် ၁ နေရာ မှာ ၈ မှတ် ဖြတ်ပြီး ဆက်လက် ဦးဆောင် နေစေ ခဲ့သလို မှတ်တမ်း ကောင်း တစ်ခု ကို လည်း ပိုင်ဆိုင် စေခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒါ ကတော့ လီဗာပူး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲ ၃၀ ဆက်တိုက် ရှုံးနိမ့်မှု နဲ့ မကြုံတွေ့ အောင် ကစားလာ နိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သက်တမ်း 27 နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်း တစ်လျောက် တတိယ အများဆုံး အရေ အတွက် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ လီဗာပူး ဟာ ယမန်နှစ် ရာသီ တုန်းက ၁၇ ပွဲ ၊ ယခု ရာသီ မှာ ၁၃ ပွဲ ၊ စုစုပေါင်း ပွဲ ၃၀ တိတိ မှာ ရှုံးနိမ့်ခြင်း ရဲ့ အရသာ ကို မထိတွေ့ အောင် ကစားနိုင် ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
လီဗာပူး ရဲ့ ရှေ့မှာ ချဲလ်ဆီး ( ပွဲ ၄၀ ဆက် ) နဲ့ အာဆင်နယ် ( ၄၉ ပွဲဆက် ) တို့ ရှိ နေပြီး ဒီမှတ်တမ်းတွေ ကို ယာဂင် ကလော့ ရဲ့ လီဗာပူး တို့ လိုက်မီ နိုင်မှာလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စား ဖွယ် စောင့်ကြည့် ရတော့ မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယမန်နေ့ ညကုန်ဆုံး အပြီး မှာ စံချိန် မှတ်တမ်းသစ် တွေ စိုက်ထူ နိုင်ခဲ့ တာ ဟာ လီဗာပူး တစ်သင်း တည်း မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး ။ အင်တာမီလန် ၊ ၀ုဗာဟမ်တန် အသင်း တို့ အပြင် ဘောလုံး သမား အချို့ ဟာလည်း ဘဝ တစ်လျောက် အမှတ် ရစေမယ့် မှတ်တမ်း ကောင်းတွေ ကို စိုက်ထူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ ကလပ် အင်တာ မီလန် ဟာ ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် မှာ တိုရီနို အသင်း ကို ၃ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို အနိုင် ရရှိမှုကြောင့် အင်တာ မီလန် ဟာ ၁၉၅၀-၅၁ ခုနှစ် တုန်းက ရရှိ ခဲ့တဲ့ ရာသီ အဖွင့် အကောင်းဆုံး စံချိန် ကို လိုက်မီ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာ ဟာ ရာသီ အဖွင့် ၁၃ ပွဲ မှာ ၁၁ ပွဲ အထိ အနိုင် ကစားထား ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ၅၀-၅၁ ရာသီ တုန်းက စွမ်းဆောင် ရည် ကို လိုက်မီ သွားနိုင်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လာမယ့် ပွဲစဉ်ကို သာ အနိုင် ကစားနိုင် ခဲ့ပါက ၂၀၁၉ – ၂၀ ရာသီ အင်တာ မီလန် အသင်း ဟာ သမိုင်းမှတ်တမ်းသစ် ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်တော့ မှာပါ ။
ဒါတင် မကသေးပါဘူး တိုရီနို နိုင်ပွဲ အပြီး မှာ အင်တာ မီလန် ရဲ့ အဝေးကွင်း နိုင်ပွဲ ဆက်မှု ဟာ7ပွဲ အထိ ရှိလာ ခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ သမိုင်း တစ်လျောက် စီးရီးအေ ရာသီ တစ်ခု အတွင်း မှာ ဒီလို မှတ်တမ်းကောင်းမျိုး မပိုင်ဆိုင် ခဲ့ဖူး ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကွန်တီ ရဲ့ အင်တာမီလန် ဟာ တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်တမ်း တစ်ခု ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
၀ုဗ် ဟာ ရာသီအစ တုန်းက ရလဒ်တွေ ကျဆင်း ခဲ့ကာ အခြေအနေ ယိမ်းယိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း မှာတော့ ရလဒ်တွေ ပြန်လည် တည်ငြိမ်လာ ခဲ့ပြီး စနေနေ့ ညက ဘုန်းမောက် ကို ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရတဲ့ ပွဲ အပြီး မှာ ၀ုဗ် ဟာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ၈ ပွဲ ကို မရှုံးနိမ့်အောင် ကစားထား နိုင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ပိုင်း မှာ အရှည်ကြာဆုံး မှတ်တမ်း ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
နောက်ထပ် မှတ်တမ်းကောင်း ပိုင်ဆိုင် ခဲ့သူ ကတော့ ဘရာဇီး ကစား သမား ရာဖင်ဟာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ စနေနေ့ ည ပိုင်း မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကိုပါ လေဘာဒီတိုးစ် ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ် မှာ ရာဖင်ဟာ ရဲ့ ဖလာမင်ဂို အသင်း ဟာ ရေးဗား ပလိတ် အသင်း ကို ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး တောင်အမေရိက ရဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလားကြီးကို ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ရာဖင်ဟာ ဟာ တောင်အမေရိက နဲ့ ဥရောပ ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ကလပ် အသင်း ချန်ပီယံ ဆုတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုပါ လေဘာဒီတိုးစ် နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ၂ ခု စလုံး ကို ရယူနိုင်တဲ့ ၁၀ ဦးမြောက် ကစား သမား အဖြစ် မှတ်တမ်း ၀င်သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ရာဖင်ဟာ ရဲ့ ရှေ့မှာတော့ ဒီဒါ ၊ ကာဖူး ၊ ပါဘလို ဆိုရင် ၊ ရော့ကေး ဂျူနီယာ ၊ ကားလိုစ့် တိဗက် ၊ ဝေါ်တာ ဆင်မြူရယ် ၊ ရော်နယ်ဒင်ညို ၊ နေမာ ၊ ဒါနီလို တို့ က ဖလား ၂ လုံး ပိုင်ရှင်တွေ အဖြစ် ရှိနေခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်း ကို အနိုင် ရခဲ့တဲ့ မန်ချက် စတာ စီးတီး ဟာ လည်း အသင်းရဲ့ သမိုင်း တစ်လျောက် ပွဲ ၄၀၀ မြောက် ပရီးမီးယားလိဂ် နိုင်ပွဲ ကို ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း ဟာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ၀က်စ်ဟမ်း နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်း ၃ ပွဲ ဆက်တိုက် ကို အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဂျေမီ ဗာဒီ ဟာလည်း ဒီရာသီ ဖန်တက်ဆီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ အမှတ် ၁၀၀ ပထမဆုံး ပြည့်မြောက် တဲ့ ကစား သမား လည်း ဖြစ်လာ ခဲ့ရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . .